पुष ३० गते शुक्रबार, हेर्नुहोस् यस्तो छ तपाईको राशिफल अनुसारको भाग्यफल! – PathivaraOnline
Home > राशिफल > पुष ३० गते शुक्रबार, हेर्नुहोस् यस्तो छ तपाईको राशिफल अनुसारको भाग्यफल!
admin January 13, 2022 राशिफल 0
आज मिति २०७८ साल पुष ३० गते शुक्रबार, तदनुसार जनवरी १४, २०२२ तथा नेपाल सम्बत ११४२, पोहेलाथ्व, तिथिः द्वादशी, २२:४२ बजे उप्रान्त त्रयोदशी, नक्षत्रः रोहिणी, २१:१० बजे उप्रान्त मृगशिरा, करणः वव ९:३८ बजेदेखि वालव, २२:४२ बजे उप्रान्त गर, योगः शुक्ल, १४:५९ बजे उप्रान्त ब्रह्म, मुस्याडुली ।
आम्दानी बढ्नेछ । परिवारजनका आवश्यकता पूरा हुनेछन् । दिगो फाइदाका लागि लगानी बढाउन सकिनेछ । प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ । व्यापार लगायत आर्थिक लाभ हुने काममा राम्रै फाइदा हुनेछ ।
आफ्नै कमजोरीले विवादमा परिनेछ भने सद्विचारले अभिप्रेरित हुनेहरूलाई फाइदा हुनेछ । प्रयत्न गर्दा व्यावसायिक काम सम्पादन हुनेछन् । सवारी साधन उपयोग गर्दा अलि सावधानी अपनाउनु होला ।
सहयोगको आशा देखाउनेहरूले धोका दिन सक्छन्, सचेत रहनुहोस् । व्यावसायिक काममा खर्च बढ्नेछ । अस्वस्थताले काममा ढिलासुस्ती हुन सक्छ । अप्रिय समाचारले दुःखी बनाउला । पढाइ लेखाइमा पनि प्रगति गर्न सकिनेछ ।
भविष्यका लागि विशेष काममा जग बसाउने मौका छ । व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुनेछ । विभिन्न सहयोग र उपहार पाइनेछ । भौतिक साधन जुट्नेछ । आयआर्जन पनि राम्रै हुनेछ। अतिथिका रूपमा सम्मान प्राप्त हुन सक्छ ।